Raiisal Wasaare Xasan Cali oo ku tukaday marxuun Cabdi Xoosh: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raiisal Wasaare Xasan Cali oo ku tukaday marxuun Cabdi Xoosh: SAWIRO
Waxa maanta dalka lagu soo celiyay Allaha u naxariistee meydka wasiirkii hore ee dastuurka Cabdi Xoosh Jibriil oo ku geeroyooday magaalada Dubey ee cariga Imaaraadka. Wasiirka ayaa in muddo ah xanuusanaa.
Allaha u naxariistii wasiirkii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaalya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa lagu aasay Qabuuraha Isbitaal madiina.
Marxuum Cabdi Xoosh oo dhashay 1956, oo waxbarashadiisa heer jaamaadeedna ku qaatay dalka Kanada, ayaa xubin ka ahaa barlamaanka, waxa uuna sidoo kale laba jeer noqday wasiirka Arrimaha Dastuurka, isaga oo hogaaminayay qoristii iyo dhameystirka Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya ee laga ansixiyay August 2012-kii.
Hoos ka daawo hab maamuuskii loo soo dejiyay marxuun Cabdi Xoosh